Amabhola Webhola Valve - Zhejiang Shineway Industry Limited.
Ibhola le-valve yebhola liyasika, lilawule, lisabalalise futhi liguqule ukuqondiswa kokugeleza kokuphakathi kwepayipi. Ibhola le-valve linezinzuzo eziningi futhi uhlobo olusha lwe-valve esetshenziswa kabanzi. Amaphayiphu ebhola anemisebenzi ehlukene kaningi anemikhakha ehlukene, ngakho-ke uyazi ukuthi yiziphi izinhlobo zama-valve sphere akhona?
1. Imikhakha ivamise ukuhlukaniswa ibe yimikhakha ethambile yokubekwa uphawu kanye nemikhakha yokuvala kanzima.
2. Indawo engenalutho isebenzisa ukwakhiwa, ukusakaza nokufaka insimbi kwekhoyili. Izinto ezinikeziwe yilezi: A105, 304, 304L, 316, 316L, LF2, 42CrMo, 1Cr13, F51, Mone1, 17-4PH, njll.
3. Ibhola lingahlukaniswa libe yibhola lezindlela ezimbili, ibhola elinemigqa emithathu, ibhola eligobile, ibhola eligobile, ibhola elintantayo, ibhola elihleliwe, ibhola elenziwe ngo-V, i-eccentric hemisphere, ibhola le-shank, ibhola eliqinile, ibhola elingenalutho, njll. ngokusho komsebenzi. Futhi ingenza ngezifiso amabhola ahlukahlukene angajwayelekile kubasebenzisi.
Izindlela ezahlukahlukene zokwakha zembulunga
1. Indlela yokusakaza: Le yindlela yendabuko yokucubungula. Kudinga isethi ephelele yokuncibilikisa, ukuthulula neminye imishini, kanye nemihlangano yokufundisana emikhulu kanye nabasebenzi abaningi, utshalomali olukhulu, izinqubo eziningi, izinqubo zokukhiqiza eziyinkimbinkimbi, kanye nokungcola Imvelo nezinga lamakhono abasebenzi enqubeni ngayinye kuthinta ngqo ikhwalithi yomkhiqizo. Inkinga yokuvuza kwepore emkhakheni ngeke ixazululwe ngokuphelele. Kodwa-ke, isibonelelo sokusebenza esingenalutho sikhulu futhi imfucuza inkulu. Imvamisa kutholakala ukuthi ukukhubazeka okusakazayo kukwenza kusulwe ngesikhathi kusetshenzwa. Uma izindleko zomkhiqizo zikhuphuka futhi nekhwalithi ingaqinisekiswa, le ndlela ayifanele ifektri yethu.
2. Indlela yokwakha: Le ngenye indlela esetshenziswa izinkampani eziningi zama-valve asekhaya njengamanje. Inezindlela ezimbili zokucubungula: eyodwa ukusebenzisa insimbi eyindilinga ukusika nokushisa ukushintsha kube yindilinga eqinile engenalutho, bese wenza ukucubungula okwenziwe ngomshini. Okwesibili ukubumba ipuleti lensimbi engagqwali eyindilinga emshinini omkhulu ukuze kutholakale isikhala esingenalutho se-hemispherical esingenalutho, bese sifakwa endaweni engenalutho ukuze sicutshungulwe ngomshini. Le ndlela inesilinganiso sokusetshenziswa okuphezulu, kepha inamandla amakhulu Imishini yokunyathelisa, yokushisa kanye nemishini yokushisela i-argon kulinganiselwa ukuthi idinga utshalomali lwama-yuan ayizigidi ezintathu ukwakha umkhiqizo. Le ndlela ayifanele ifektri yethu.
3. Indlela yokuphotha: Indlela yokuphotha yensimbi iyindlela yokucubungula esezingeni eliphakeme enama-chips amancane futhi angenawo, okungokweligatsha elisha lokucindezelwa kwengcindezi. Sihlanganisa izici UKWAKHA, extrusion, ugingqe futhi kweqa, futhi has okusezingeni eliphezulu impahla ukusetshenziswa izinga (Kuze 80-90%), ukonga eziningi ukucutshungulwa isikhathi (1-5 imizuzu ukwakha), futhi amandla impahla kungaba kabili emva ukuphotha. Ngenxa yokuthintana kwendawo encane phakathi kwesondo elijikelezayo noqweqwe lomsebenzi ngesikhathi sokuphotha, impahla yensimbi isesimweni sokuxineka esinezindlela ezimbili noma ezintathu, okulula ukusikhubaza. Ngaphansi kwamandla amancane, ukucindezela kokuxhumana okuphezulu kweyunithi (kufika ku-25- 35Mpa), ngakho-ke, imishini ilula ngesisindo futhi amandla aphelele adingekayo mancane (ngaphansi kuka-1/5 kuya ku-1/4 womshini). Manje seyaziwa imboni ye-valve yakwamanye amazwe njengohlelo lokonga amandla eyindilinga yokucubungula ubuchwepheshe, futhi iyasebenza nasekucubunguleni ezinye izingxenye ezijikelezayo eziyize. Ubuchwepheshe bokuphotha busetshenziswe kabanzi futhi buthuthukiswa ngesivinini esikhulu phesheya. Ubuchwepheshe nezinto zokusebenza zivuthiwe kakhulu futhi zizinzile, futhi ukulawula okuzenzakalelayo kokuhlanganiswa kwemishini, ugesi kanye ne-hydraulic kuyabonakala.
Ukusakazwa kwama-valve wethu we-ball kwenziwa ngesihlabathi esigcotshisiwe, ngokubukeka okuhle, usayizi ojwayelekile, nokubunjwa kwesikhathi esisodwa.
Izici ze-Ball Valve:
DESIGN IZINGA: API6D, API608, ASME B16.34, Din 3357, JIS B2001
UBUSO NOBUSO: ASME B16.10, DIN 3202, EN 558, JIS B2002
I-FLANGE CONNECTION: ASME B16.5, DIN EN 1092-1, JIS B2212, JIS B2214
I-INSPECTON NOKUHLOLA: API598, API6D, DIN 3230, EN 12266, JIS B2003
UMLILO OPHEPHILE: I-API 607, i-ISO 10497
Castings yethu bonke camera isihlabathi ubuchwepheshe
Ukwakhiwa kwethuluzi lesikhunta ----- Ukwenza ithuluzi lesikhunta ---- ingcindezi ye-wax ----- ukukhanda i-wax ----- iqembu lesihlahla ------- igobolondo (idiphu) ----- Ukushiswa - igobolondo ukuhlaziywa kokuthanjiswa-kwamakhemikhali-ukuchelela-ukuhlanza-ukushisa-ukwelashwa-ukugcina umkhiqizo ngomkhiqizo ophelile.
Ukucindezela i-wax (umjovo we-wax Moldinging) --- ukulungisa i-wax - ukuhlolwa kwe-wax - isihlahla seqembu (isihlahla se-wax module) - ukwenza igobolondo (idiphu lokuqala, isihlabathi, bese unamathisela, futhi ekugcineni ukomisa umoya kwegobolondo lesikhunta) --- ukwenza i-dewaxing (ukufuthwa kwe-steam) --- ukosa igobolondo lesikhunta --- ukuhlaziywa kwamakhemikhali - ukuthela (ukuthulula insimbi encibilikisiwe kugobolondo lesikhunta) - ukudlidliza ukuthuthwa kwamatshe - Ukusika nokwehlukanisa ukuphonsa nokuthela induku --- -Ukugaya isango - Ukuhlola kokuqala (ukuhlolwa kwe-burr) - Ukuqhuma kwe-Shot - Imishini - Ukupholisha - Ukuhlolwa komkhiqizo ophelile--
Inqubo yokukhiqiza yokusakaza icishe ifane nale. Ngokuvamile, ingahlukaniswa ibe yi-wax ecindezelayo, ukwenziwa kwegobolondo, ukuthululwa, ukucubungulwa ngemuva, nokuhlolwa.
Ukucindezela i-wax kufaka (ukucindezela i-wax, ukulungisa i-wax, isihlahla seqembu)
Ukucindezela i-Wax --- Sebenzisa umshini wokucindezela i-wax ukwenza isikhunta se-wax
Lungisa i-wax --- lungisa isikhunta se-wax
Isihlahla seqembu --- iqembu iLamo libe yisihlahla
Ukwenza igobolondo kufaka phakathi (ilenga isihlabathi, i-slurry elenga, ukomisa umoya)
Ukucubungula okuthunyelwe kufaka phakathi (ukulungiswa, ukuqhumisa ngokudubula, ukuqhumisa isihlabathi, ukukha amanzi,)
Ukuthela kufaka phakathi (ukosa kanye nokuhlaziywa kwamakhemikhali kubizwa nangokuthi i-spectroscopy, ukuthulula, ukudlidliza kwegobolondo, ukusika isango, nokugaya isango)
Ukucubungula okuthunyelwe kufaka phakathi (ukuqhumisa isihlabathi, ukuqhumisa ngokudubula, ukulungisa, ukukha)
Ukuhlolwa kufaka phakathi (ukuhlolwa kwe-wax, ukuhlolwa kokuqala, ukuhlolwa okuphakathi, ukuhlolwa komkhiqizo osekuqedile)
Izinto Zokulingisa: CF8, CF8M, CF3, CF3M, 4A, 5A, 6A, 904L, Monel, Hastelloy, Aluminium bronze